ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့ဆေး ၁၀၁: ဘုံမေးခွန်း ၁၀ ခု၊ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇွန်လ 2022
မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ နှိပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကုမ္ပဏီ သတင်း ဖျော်ဖြေရေး ရပ်ရွာ သတင်း၊
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> Allergy Rx 101: သင်၏ရာသီအလိုက်ဓါတ်မတည့်မှုဆေးဝါးမေးခွန်းများကဖြေကြားခဲ့သည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသန်း ၅၀ ကျော်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဓာတ်မတည့်ခြင်းခံစားရသည် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ရောဂါပြီးပညာဆိုင်ရာအမေရိကန်ကောလိပ် ။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုများသည်နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်နှာခေါင်းမှုတ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေလျှင်သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာသင်သည်လေထဲရှိတစ်ခုခုနှင့်ဓာတ်မတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုရှိပါကထိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရောဂါလက္ခဏာများကိုဖယ်ရှားရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ရပြီးရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်ဆေးအတွက်သင့်အတွက်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုသိပါတယ်။ ဤရွေးချယ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သာမန်မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများမှာ -
ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည် ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်စဉ်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်ဇန်နဝါရီမှAprilပြီလများအတွင်းသို့မဟုတ်နွေရာသီအစောပိုင်းအထိပင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုများတွင်သစ်ပင်များ၊ မြက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပေါင်းပင်များမှဝတ်မှုန်များပါဝင်သည်။
နှစ်ရှည်ဓာတ်မတည် တစ်နှစ်ပတ်လုံးသင့်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ နှစ်ရှည်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောအကြောင်းရင်းများတွင်မှိုများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ အင်းဆက်ပိုးများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် dander တို့ပါဝင်သည်။
မည်သို့ပင်အမျိုးအစား ဓာတ်မတည် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှု၏အကြောင်းရင်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းလက္ခဏာများအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးသည်သင်တွေ့ကြုံနိုင်သည်။
ဓာတ်မတည့်ဆေးများ၊ OTC နှင့်ဆေးညွှန်းနှစ်ခုလုံးသည်၎င်းတို့ကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ယားယံပြီးနှာရည်ယိုယွင်းနေသောမျက်စိရှိပါက , သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သော antihistamine မှအကျိုးရှိလိမ့်မယ် Claritin ။ သင်ကဲ့သို့သောနှာခေါင်း steroid ကိုထည့်နိုင်သည် Flonase သူတို့အားစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောနှာခေါင်းဓာတ်မတည်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာရာကူညီပေးသည်။ နှာခေါင်းဆားသည်နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများကိုခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ OTC ဓာတ်မတည့်မျက်လုံးပေါက်သည်ယားယံနေသောမျက်စိကိုသက်သာစေသည်။
သင့်မှာနှာခေါင်းရှူနေရင် , သငျသညျ decongestant add ချင်ပေမည်။ များသောအားဖြင့်မငိုက်မတည့်သောဓာတ်မတည့်ဆေးများတွင်ဆေးယဉ်ပါးသည့်ဆေးများပါ ၀ င်သည် Allegra-D ။ သို့သော်သင်၌သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားပါကဤဆေးဝါးများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သော anti -istamines များသည် glaucoma သို့မဟုတ်ဆီးကျိတ်ပြproblemsနာရှိသူများအတွက်လုံခြုံမှုမရှိပါ။ သင်၏ဆေးဝါးပညာရှင်သည်သင်၌ရှိနေသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်သင်သောက်သုံးသည့်အခြားဆေးဝါးများကိုစဉ်း စား၍ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
၃။ အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ယေဘူယျ OTC ဓါတ်မတည့်ဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းကပိုကောင်းပါသလား။
ယေဘုယျဆေးဝါးများသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသက်သာစေရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့စျေးနှုန်း၏အနည်းငယ်မျှသာပေးသည်။ သင်ယေဘူယျထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကသင်၏ဆေးဝါးဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။ ဓါတ်မတည့်သည့်အတန်းမှာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
FYI တစ်ခုကဲ့သို့သင် OTC ဓာတ်မတည့်ဆေးဝါးများအတွက် SingleCare နှင့်အထူးလျှော့စျေးများရနိုင်သည်။ သို့သော်သင်လိုအပ်သည်မှာ - ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ ။
4. OTC ဆေးများမထိရောက်ပါကဆေးညွှန်းရွေးစရာများရှိပါသလား။
ဓာတ်မတည့်ဆေးအများစုသည်ယခုအခါဆေးဝါးများ (OTC) တွင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်နှာစေးမှုန့်များကိုဆေးညွှန်းဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည် Astepro ( ဇော်လတ် ), Dymista (azelastine / fluticasone) နှင့် Nasonex (mometasone) ။ Flonase ကိုဆေးညွှန်းနှင့် OTC အားသာချက်များဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
OTC ဆေးများသည်ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများကိုကုသရန်အတွက်များသောအားဖြင့်များသော်လည်း၊ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကို OTC ဆေးများမှမသက်သာပါကဆေးညွှန်းဆိုင်ရာဆေးညွှန်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မရသိရန်သင့်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
သင့်တွင်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုများရှိပါကရှူရှိုက်မိပါကသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဆေးများအပါအ ၀ င်နှစ်မျိုးလုံးကိုသက်သာစေရန်ဆေးညွှန်းအရရနိုင်သည်။ စင်ကာပူ ( montelukast ) ။
အဟောင်း antihistamines ကဲ့သို့သော Benadryl (diphenhydramine) သည်အလွန်ငိုက်ငိုက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Claritin (loratadine) လို anti -istamines များ၊ Allegra (fexofenadine), နာမ် (cetirizine) နှင့် ဇီလာ ( levocetirizine ), ဖြစ်ကြသည် ငိုက်စေခြင်းငှါလျော့နည်းဖွယ်ရှိ ဒါပေမယ့်လူနာတော်တော်များများကအိပ်ချင်နေတယ်။
မည်သည့်ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန် (ဥပမာကဲ့သို့သော) ကိုရွေးချယ်သောအခါသတိထားပါ NyQuil ) များစွာသောသူတို့က sedating antihistamines များပါဝင်သောကြောင့်, ဓာတ်မတည်သို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းအဘို့အ။ သင့်ကိုချက်ချင်းအိပ်ပျော်စေမည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်သင့်ဆေးဝါးကုသသူအားတောင်းဆိုပါ။
သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ဓာတ်မတည့်ဆေးအချို့သည်အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည် ပေါင်းစပ် ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ဆန့်ကျင်သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများမရှိပါက antongistamine ကို decongestant ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သို့သော်သင်သည်ဓာတ်မတည့်ဆေးဝါးများကိုနှစ်ဆတိုးရန်မလိုချင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ယေဘုယျအားဖြင့် Claritin ကိုနံနက်ယံ၌၎င်း၊ ညနေပိုင်းတွင် Zyrtec ကိုမခံယူလိုပါ (သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းရှားပါးသောကိစ္စများမှအပ) ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုသို့ဖြစ်သည် မသင့်တော်ဘူး ဓာတ်မတည်ဆေးများကိုအရက်နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်။ ပိုမိုသက်သာစေသောဆေးကိုသောက်ခြင်းဖြင့်အရက်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်တိုးများစေနိုင်သည်။ အသစ်စက်စက်ပေါင်းစပ်ဆေး antihistamines များကိုအရက်နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်နည်းပါးသော်လည်းရှောင်ရှားသင့်သည်။
၈။ OTC ဓာတ်မတည့်ဆေးများကိုနေ့တိုင်းသောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသလား။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ - သင်လမ်းညွှန်မှုအတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ နှာခေါင်း steroids သည်ထိရောက်မှုရှိရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင်ရံဖန်ရံခါလက္ခဏာများရှိပါကထုပ်ပိုးခြင်းလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာပြီး antihistamines များကိုသောက်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။
သက်သာစေသောဆေး antihistamines များသည်လူနာအများစုအတွက်အတော်အတန်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဆီးကျိတ်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ် glaucoma ရှိလျှင် (Benadryl ကဲ့သို့) အဟောင်း antihistamines များကိုမသောက်သင့်ပါ။ သင့်တွင်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားပါက decongestants ကိုမသောက်သင့်ပါ။ သင်မှန်လျှင် ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်နို့တိုက် , ဓာတ်မတည်ဆေးများ (သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးဝါးများ) ကိုအသုံးမပြုခင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
10. ငါအရမ်းရှုပ်ထွေး - ဓာတ်မတည်အတန်းမှာဒါလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆေးတစ်ခုစီကိုဖျက်နိုင်မလား။
ဓာတ်မတည့်အတန်းမှာအလွန်ဖြစ်နိုင်သည် ရှုပ်ထွေး ။ သင်သည် Claritin တစ်ဘူးအတွက်လာမည်ဟုထင်ပြီးနောက် ၂၄ မျိုးမတူသော Claritin: brand, generic, ကွဲပြားသောဆေးညွန်းနှင့်ပုံစံများကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
Antihistamines: ဤဆေးများသည် histamine ကိုပိတ်ဆို့ပေးပြီး၊ နှာချေခြင်း၊ နှာခေါင်းပေါက်ယိုခြင်း ။ Benadryl (diphenhydramine) သည်ပထမမျိုးဆက် antihistamine ဖြစ်ပြီးငိုက်ိုက်စေနိုင်သည်။ Claritin (loratadine)၊ Allegra (fexofenadine) လို anti -istamines များ။ နာမ် (cetirizine) နှင့် ဇီလာ (levocetirizine) သည်ငိုက်မြိုက်စေခြင်းကိုနည်းသည်။
Decongestants: ၎င်းသည်နှာခေါင်းကိုသက်သာစေသည်။ တစ် ဦး ကဘုံ decongestant ဖြစ်ပါတယ် ဆူဖော (pseudoephedrine သို့မဟုတ် phenylephrine) Decongestants ဆေးတစ်မျိုးတည်းကိုရောင်းပြီး antiistist ဆေးများ (Allegra-D, Zyrtec-D , Claritin-D ) ။ သင့်တွင်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ရှိပါက decongestants ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်၊
နှာခေါင်း steroids: ၎င်းသည်သင်၏နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများရောင်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးနှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေသည်။ သူတို့သည်အလုပ်လုပ်ရန်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ ဥပမာအချို့မှာ - Flonase (fluticasone)၊ Nasacort (triamcinolone) နှင့် ကြံ့ (budesonide) ။ နှာခေါင်းစတီရွိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်၏နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများသည်အခြောက်မသွားစေရန်နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းသို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှားများကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
မျက်လုံးပေါက် ဓာတ်မတည့်သောမျက်ခုံးပေါက်ယားခြင်း၊ မျက်လုံးနီခြင်းလက္ခဏာများကိုသက်သာစေသည်။ ဥပမာအချို့မှာ Zaditor (ketotifen) နှင့် Pataday (olopatadine) ကို FDA မှအတည်ပြုပြီးမကြာမီ OTC တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်လျော်သော OTC ဓာတ်မတည့်ဆေးကိုသင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါကအမြဲတမ်းသင်၏ဆေးဝါးဆရာဝန်နှင့်ပြသပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရုန်းကန်နေလျှင်၊ သင်သည်ဓာတ်မတည့်သူနှင့်ရက်ချိန်းယူသင့်သည်၊ EpiPen (အရေးပေါ် epinephrine ) ။
သင့်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆီးချိုရောဂါအက်ပ် ၁၅ ခု
အိတ်ဆောင်နှင့်နုတ် ယူ၍ ရသောကွာခြားချက်ကားအဘယ်နည်း
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် pepto bismol ကိုငါသောက်နိုင်သလား
allegra နှင့် zyrtec ကိုအတူတကွယူနိုင်သည်
atrial fibrillation အတွက်အကောင်းဆုံးသွေးပါးလွှာကဘာလဲ
ဆီးချိုမဟုတ်သူများတွင် reactive hypoglycemia ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာများ